Imakethe yokumba isando kagesi engenazintambo izokwanda: abashayeli abaphambili nezinhlelo zokusebenza ezingaba khona ngo-2020-2026
Ngokusho kombiko wethu, imakethe yezinsimbi zokumba isando sikagesi engenazintambo ikhule ngo-2019 uma kuqhathaniswa nango-2018. Ngenxa yokuncipha kwemali esetshenzisiwe embonini ngemuva kokuqubuka kwe-Covid-19 kanye nesidingo esingesihle, imakethe yamarigi wokumba izando kagesi engenazintambo ingahle yehle ngo-2020. Ngaphezu kwalokho, i-cordless e ...
Intambo Ye-Rotary Hammer Drill Market 2021 Global Analysis, Trends, kanye ne-Forecast kuya ku-2026
I-Market Study Report, LLC manje isihlinzeka ngombiko wocwaningo we "Wired Rotary Hammer Drill Market" isifinyezo semininingwane ebalulekile ephathelene nosayizi wemakethe wemboni, ubukhulu bomncintiswano, amathemba ezindawo, amasheya esincintisana nawo kanye namathrendi abathengi. Umbiko uphinde uqokomise ...
Usayizi wemakethe we-Rotary hammer drill, share, trend, iphrofayili yenkampani, ukuhlaziywa kwesilinganiso esizayo, isibikezelo 2027
ENew Jersey, eU.SA, lo mbiko ubizwa nge- “Rotary Hammer Drill Market” futhi ungomunye wezengezo ezibanzi futhi ezibaluleke kakhulu ezinqolobaneni zocwaningo zemakethe ze- “Verified Market Report”. Inikeza ucwaningo oluningiliziwe nokuhlaziywa ngezici ezibalulekile ze-rot rot ...
i-128 on-line Canton Fair eChina
I-128th China Import and Export Fair (i-Canton Fair) ibanjwa online kusukela ngo-Okthoba 15 kuya ku-24. Imema izinkampani ezivela kuwo wonke umhlaba ukuthi zibambe iqhaza "esigabeni samafu ezingama-35". Le micimbi ibanjelwa emazweni nasezifundeni ezingaphezu kwezingama-30, kuhlose ukuhlinzeka abakhangisi nabathengi nge ...
Lezi zinhlobo zamaphrojekthi zidinga okungcono kakhulu okungenazintambo kwesando sokuprakthiza, okunganqamula kulezi zindawo ezinzima.
Uma uthenga imikhiqizo ngesinye sezixhumanisi zethu, iBobVila.com kanye nabalingani bayo bangathola amakhomishini. Uma ubhola into eminyene kakhulu, umshayeli wakho ojwayelekile kungenzeka angayisiki. Izinto ezifana ukhonkolo, amathayili, namatshe kudinga amandla angeziwe kusuka kubhola lokuprinta, ngisho ne-pow kakhulu ...
Makita HM1213C Demolition Hammer | Pro Ithuluzi Ukubuyekeza Makita HM1213C Demolition Hammer
Isando sokubhubhisa iMakita HM1213C 23 sikipondo sihlinzeka ngamakhilogremu angu-18.8 wamandla omthelela ovela kumoto yaso eyi-14 amp. Ngaphezu kwalokho, yize lesi sando sigcwele amandla, ingxenye ekhangayo ngokwengeziwe yokukhishwa yisibambo seMakita AVT, esinciphisa kakhulu umuzwa wokudlidliza lapho usebenzisa la mandla. Su ...
Ungayakha kanjani imisebenzi yokwakha yakudala: Izingcweti eziholayo zakha izinto ezinhlanu ezinhle zomndeni | Ukuzimela
Zenzele futhi nobuciko akuhlali kungavumelani ngaso sonke isikhathi. Njengoba uThomas Bärnthaler embula encwadini yakhe entsha, esebenzisa amathuluzi amaningana, amakhono athile we-DIY, nemiyalo ekhishwe ngabaqambi abaphambili emhlabeni, ongakwenza kuyamangalisa Ingabe uyafuna ukwenza ibhukumaka kuma-athikili nezindaba zakho ozithandayo ...